Tai Mountain, တောင်တက် အမှတ်တရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » Tai Mountain, တောင်တက် အမှတ်တရ
Posted by weiwei on Nov 18, 2010 in Photography, Travel | 15 comments
China Shandong tai mountain
ည ၁၁ နာရီ တောင်ခြေ မုခ်ဦး
မနက် ၅ နာရီခန့် တောင်ထိပ်ရောက်ခါနီး
Tai mountain ကတော့ ကျွန်မတက်ဖူးသမျှတောင်တွေထဲမှာ အမြင့်ဆုံးနဲ့ အလှဆုံးပါပဲ။ ရှန်းတုန်းပြည်နယ် တိုက်အန်းမြို့မှာ တည်ရှိပါတယ်။ တောင်နံမည်က ထိုက် လို့ခေါ်တယ်။ အမြင့်ပေ 5069 ရှိပြီး တရုတ်ပြည်ရဲ့ အထင်ရှားဆုံး တောင် ၅ ခုထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းဝင်တဲ့ရာဇ၀င်အထောက်အထားတွေ၊ သာသာရေးအယူဝါဒထွန်းကားမှုတွေနဲ့ လှပတဲ့ရှုခင်းတွေကြောင့် ခရီးသွားတော်တော်များတဲ့ တောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တောင်ပေါ်မှာ buddhism, taosim (တာအိုအယူဝါဒ), နဲ့ ကွန်ဖြူးရှပ် အယူဝါဒဆိုင်ရာ ဘုရားကျောင်းတွေရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော် ချင်မင်းဆက်လက်ထက်ကထဲက ဘုရားရှိခိုးဆုတောင်းတဲ့ တောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရင်တွေက heaven and earth ကို ရှိခိုးတဲ့အခါ အဲဒီတောင်ထိပ်က နေထွက်ချိန်မှာ heaven ကို ရှိခိုးပြီး တောင်ခြေကနေ earth ကို ရှိခိုးပြီး သစ္စာအဓိဌာန်ပြုလေ့ရှိပါတယ်။ မင်းအဆက်ဆက် ဆုတောင်း သစ္စာပြုကြတဲ့ ပင်မနေရာအဖြစ် ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ သဘာဝကျောက်တုံးတွေနဲ့ ကျောက်စာတွေလဲ အများကြီးရှိပါတယ်။ ခရီးသွားတွေက အဲဒီတောင်ပေါ်ကို မနက် နေထွက်ချိန်ရောက်အောင် ညသန်းခေါင်အချိန်မှာ စပြီးတောင်တက်ကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့က သူများထက်တစ်နာရီစောပြီး စတက်ပါတယ်။ ည ၁၁ နာရီခန့်မှ စတင်ပြီး တောင်တက်တယ်။ လှေကားထစ်တွေများပြီး မက်ပါတယ်။ ညဘက်ဆိုတော့ မီးမှိန်မှိန်နဲ့မို့လို့ တောင်တက်လမ်းက ဓါတ်ပုံတွေကို မပြတော့ပါဘူး။ မရပ်မနား တက်တာတောင်မှာ မနက် ၆ နာရီနီးပါးမှ တောင်ထိပ်ကိုရောက်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့က ကံဆိုးစွာနဲ့ မိုးတိမ်တွေရှိပြီး နေကလှလှပပ မထွက်လာပါဘူး။ နွေရာသီပေမယ့် တောင်ပေါ်မှာ ခိုက်ခိုက်တုန်အောင်ချမ်းပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းတွေဝင်ကြည့်ပြီး ရှုခင်းတွေဓါတ်ပုံရိုက်ကြပါတယ်။ အရမ်းပင်ပန်းပေမယ့် ရှုခင်းတွေမြင်ရတော့လဲ ပင်ပန်းတာတွေ ပျောက်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဆင်းကိုတော့ ခြေထောက်နဲ့ မဆင်းနိုင်တော့တာကြောင့် ပုံမှာပါတဲ့ လျှပ်စစ်ကားလေးနဲ့ပဲ တောင်တစ်ဝက်အထိ ဆင်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့မှ ကားနဲ့တဆင့် ထပ်ဆင်းရပါတယ်။ အခုဓါတ်ပုံတွေအားလုံးက ကျွန်မသူငယ်ချင်းလက်ရာ ဓါတ်ပုံများဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်ပြည်မှာ စိတ်ပျက်ရတာတစ်ခုကတော့ ခြေထောက်နဲ့တောင်တက်တာတောင်မှ တောင်တက်ခ ၁၂၀ ရွမ်ပေးရသေးတယ်။
ယုံကြည်မှုတစ်မျိုးပေါ့ … ဖြစ်ချင်တာတွေကိုဆုတောင်းပြီး အဲဒီဆုတောင်းကို သော့ခတ်သိမ်းထားခဲ့တာလို့ ကြားဖူးတယ် (သေချာတော့မသိဘူး) … ဖဲကြိုးအနီလေးတွေကိုလဲ ဆုတောင်းပြီး သစ်ပင်မှာ ချည်ကြသေးတယ် … သစ်ပင်တစ်ပင်လုံး နီရဲနေတာပဲ … ကျွန်မတို့တောင် ဖဲကြိုးချည်ခဲ့သေးတယ် …
အခု မဝေပြတဲ့နေရာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော် ချင်မင်းဆက်လက်ထက်လို့ဆိုထားတာမို့ ..
ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုအခြေခံက တရုတ်ကလာတယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့မရနိုင်အောင်ပါပဲ..။
အိန္ဒိယမှာလည်း .. ပုဂံပုထိုးတွေအတိုင်းတည်ထားတဲ့ တပုံစံထဲမြို့ လေးတခုရှိတယ် တီဗီထဲမြင်ဖူးတယ်..။ သူတို့ဆီမှာတော့ လူတွေနေတုံးမို့ .. ရှုပ်ရှက်ခပ်နေတာပေါ့..။
ရောက်ဖူးသူတွေ ..ဓါတ်ပုံတင်ပေးရင် ကျေးဇူးတင်မှာ.။
ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှု ဘယ်ကလာလဲသိတော့ .. ကောင်းတာပေါ့..။
သမိုင်းသိတော့ ..မအ, ဘူးပေါ့လေ..။
တရုတ်ဘုရားကျောင်း ကတော့ ၀င်တာနဲ့ ထုံစံအတိုင်း မီးခိုးလုံးနဲ့ စတွေ့တာဘဲ.. တရုတ်ကလည်း သူ့အယူဝါဒက မီးနဲ့ ကို မလွတ် ကင်းဘူးလို့ ခံစားရတယ်။ သေရင်လည်း မီးရှို့ပေး.. ဘုရားကိုလည်း အမွေးနံသာ အမွေးတိုင်.. ပြောလို့သာ ပြောတာ.. တရုတ်ဘုရားကတော့ မီးခိုးမွန်တာ တော်တော် ခံရမှာ.. လူတွေကတော့.. သူတတိုင် ငါတတိုင် သူတထုတ် ငါတထုတ်.. အားရပါးရတော့ ရှိသေား။
ဖဲကြိုးချည်တာ သော့ခတ်တာ.. နောက်တမျိုး မြင်ဘူးသေးတယ်.. အမိုးပြား ကျောက်ချပ်တွေမှာ စာရေးတာ။ စုံနေတာဘဲ
အမွှေးတိုင်ထွန်းတာကတော့ လွန်လွန်ကျူးကျူးပဲ …
တရုတ်ပြည်မှာ ဘုရားကျောင်းတော်တော်ရှားတယ် … မြို့အကြီးကြီးတစ်မြို့မှာ အလွန်ဆုံးရှိမှ ၅ ကျောင်းထက် မပိုဘူး … ဘုရားကျောင်းတွေကို သွားလည်တဲ့သူလဲ မရှိသလောက်ပဲ … တရုတ်လူငယ်တစ်ယောက်ကိုမေးရင် ဘာသာရေးအကြောင်း ဘာမှမပြောနိုင်ဘူး …
သူတို့ဆီက ဘုရားကျောင်း ဆိုတာ.. ဆူး တို့ မြန်မာပြည်က စေတီပုထိုးတွေနဲ့ မတူညီကြဘူး။ အခြေခံ အနေနဲ့ ဘာသာတူပေမဲ့ မတူညီတာတွေ အများကြီးဘဲ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ ဘုရားတွဲနေတာတွေ မြင်တာများတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဆိုလည်း နတ်ရုပ်မျိုးစုံနဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေ အရုပ်တွေ။
စေတီပုထိုးမှာတော့.. ဘုရားမှာ ဘုန်းကြီး မနေဘူး.. ဘုရားနဲ့ အနီးအနား မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ ၀ိုင်းရံနေကြတယ်။
တရုတ်ပြည်မှာ လူတွေ ဘုရားကျောင်း မသွားတာလည်း မပြောနဲ့.. ဘုန်းကြီးတွေကို သတ်သတ်နေတာ.. ဘုန်းကြီးက လယ်စိုက် ထွန်ယက်.. ပြီး ရှာစားတယ်။ လူတွေ မလာလည်း သူ့ဟာသူ ရှာစားနေနိုင်တဲ့ အတွက် လူတွေ နဲ့ ဝေးဝေး နေလို့ရတယ်။
မြန်မာပြည် သာသနာ အနေနဲ့ ဆိုရင် နေ့စဉ် ဆွမ်းခံ ကြွရတယ်။ ရဟန်းက ပိုက်ဆံ ကိုင်ခွင့်မရှိသလို စီးပွားရေး မလုပ်ရဘူး။ ၀ိနည်းကိုလိုက်တာ ကြတယ်။ ထို့ကြောင့် လူတွေ နဲ့ အနေနီးပြီး လူတွေ နဲ့ အဆက်အသွယ်အမြဲ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် လူတွေက ဘုန်းကြီးကျောင်း ဘုရားတို့ဆီကို သွားဖို့.. ၀န်မလေးသလို အလေ့အထ ဖြစ်နေတာပေါ့ကွယ်။
ဆူးပြောတာမှန်ပါတယ်ကွယ် .. ဒါပေမယ့်ကွယ် အခုခေတ်ဗမာလူငယ်တွေက ဘုရားဖူးသွားရမှာအလွန်ပျော်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားရတာ ကြောက်ကြတာ ဘာကြောင့်များလို့ ထင်ပါသလဲ ??
ဘုရားဖူးသွားတော့ ဝေလေလေပေါ့.. ဥပမာ ကျိုက်ထီးရိုးလို နေရာမျိုးဆို.. စကားပြောရင်း သွားကြတာ ပျော်မှပျော်..
ဘုရားပွဲဆို ပိုတောင် ပျော်သေးဘယ် ဘုရားပေါ် မတက်ခင်.. ဘုရားအောက်က ဈေးတန်း အရက်တန်းမှာ ပျော်လို့.. ဇတ်ပွဲမှာလည်း ကြည့်ရတာ အချိန် မပေးနိုင်ဘူးပေါ့လေ။
ဘုန်းကြီးကျောင်း သွားရမှာ ကြောက်ကြတယ် ဆိုတာကိုတော့ ၅၀%ဘဲ လက်ခံမယ်.. အခုခေတ်မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ သင်တန်းတွေ ဖွင့်ပြီး ကလေးတွေ သီလဆိုတာ ဘာလဲ ကောင်းမှု ဆိုတာ ဘာလဲ သိအောင် လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ ကျောင်းတွေ ရှိတယ်။ ကလေးတရားပွဲတွေ ရှိတယ်။ ဘုန်းကြီး တရားပွဲ တပွဲ သွားရင် ဝေရာဝတ်စ (စာလုံးပေါင်းမှား) အဲဒီလူတွေကို သေချာ လေ့လာပါ.. လူငယ်တွေ တော်တော် ပါလာကြပြီ။
ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားရမှာ ကြောက်တာ ဘုန်းကြီး တရား ရှည်ရှည်ဟောပြီး ငိုက်ရမှာ ကိုပါ။
ဆူးပြောတဲ့ သင်တန်းတွေနဲ့ နီးစပ်တာက လူနည်းစုအဆင့်ပဲရှိနေသေးတယ် .. အဲဒါတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းမယ် …
ဘုန်းကြီးကျောင်းကို အလှူသွားလုပ်ရတဲ့နေရာလို့ သတ်မှတ်ထားတော့ ပိုက်ဆံမရှိရင် မသွားချင်ကြပါ … မိန်းကလေးတွေက အ၀တ်အစားကိုးရို့ကားယားဝတ်လေ့ရှိတော့ ဘုန်းကြီးရှေ့မသွားချင်ပါ … ဘုန်းကြီးနဲ့ စကားပြောနည်းမကျွမ်းကျင်တော့ စကားလဲမပြောချင်ကြပါ … စာသင်တိုက်ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေက ဖိနပ်မစီးရလို့ ခြေထောက်နာပါသဖြင့် မသွားချင်ကြပါ … ဆုံးမစကားရှည်ရှည်ပေးတာကိုလဲ မနာယူချင်ကြပါ …
ဒါပေသိ … ၂ လုံး ၃ လုံး ပေးသော ဘုန်းကြီးကျောင်းများကတော့ စည်ကားပါသည် ..
ပိုက်ဆံ မရှိလည်း သွားရမှာ မကြောက်ပါဘူး.. သွားရင် ထမင်းစားချိန်ဘဲ သွားတယ်။ သိတယ်မလား.. အလကား စားရတယ်။ ဘုန်းကြီး ကျောင်းမှာ ဒကာတွေ စုံနေရင်.. တယောက်တခွက်နဲ့.. ကောင်းမှကောင်း… ရှလွတ်….
ဘုရားဖူးရင် လိပ်ဥတူးလို့ ရလို့ပေါ့ကွယ်။
ကျနော်တို့လဲမဝေကျေးဇူးကြောင့်တရုတ်ပြည်တော်တော်နှံ့နေပီ လေ့လာစရာတွေ မှတ်သားစရာတွေနဲ့ ငေးမောစရာတွေ……စုံနေပါပီဗျာ
ကျိုက်ထီးရိုး ကိုသတိရတယ်ဗျာ ရေတံခွန် သွားတဲ့ လမ်းမှာ ဝိဇ္ဖာ တောင်လား ဘာလား မမှတ်မိတော့ အဲဒီက ဘုန်းကြီး ကဖိုထိုးနေတာ တောတွေထဲသွားရင်း အဲဒီကိုရောက်သွားတော့ ဗိုက်စာတာနဲ့ ဘုန်းကြီးဆီိကထမင်းတောင်းစားကြတယ် ဘာမှ မရှိတော့ ထန်းလျှက်နဲ့ ရေကိုသာအဝသောက် အလှုငွေထည့်ပြီးပြန်ကြတယ်ထူးဆန်းတာ တခုက လူသူမရောက်တဲ့ တောနက်ထဲ ကစေတီလေးတွေရဲ့ ကောင်းမှု့ရှင်တွေက ရွှေမြို့တော်က လူတွေဖြစ်နေတာအံသြမိတယ် ဒါနဲ့၅နှစ်လောက်ပြာတော့ပြန်ရောက်သွားတော့သီစုံပဲဟင်းနဲ့ ထမင်းကို သာမညလိုဘဲကြွေးနေ နိုင်ပြီဆိုတော့ တခေါက် အံသြရပြန်တယ် ….။
သော့ ခလောက်တွေမြင်တော့လည်း ရွှေတိ ဂုံဘုရားက ရှင်မကွဲ ဘုရှားကို သတိရမိပြန်ပါတယ် ဘယ်မုဒ်ဦးကလည်းမမှတ်မိတော့စုံတွဲတွေ ထာ ဝရမကွဲ လက်ထပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ရှင်မကွဲမှာဆုတောင်းတဲ့လူတွေက ကတ်ခွာနံရံချိတ်တဲ့ ဟာလေးနဲ့ ကတ်ပြီးဆုတောင်းကြတယ် ၁၀ ဦးမှာဆယ်ဦးစလုံးညားတာတော့ ကိုယ်တွေ့ပါ သူငယ်ချင်းတွေအကုန်ပေါင်းရတယ် နိုင်ငံရပ်ခြားရောက်နေတဲ့ လူတွေလဲပေါင်းရတာ တွေရ တော့ ဆန်းကြယ်တာအံသြမိပြန်ရော………………
Thanks ~! always post to china travel story.